कस्तो अवस्थामा पुरुष बढी कामुक हुन्छन् ? - Malayakhabar
होम पेज यौन र जीवन कस्तो अवस्थामा पुरुष बढी कामुक हुन्छन् ?
सोधका क्रममा उनीहरुले तपाईको पार्टनर कति आकर्षक छ । उनका कति केटा साथीहरु छन् ? जस्ता प्रश्नहरु गरेका थिए । उनले पुरुष साथीहरुलाई कति आकर्षक मान्छिन् ? उत्तरमा पार्टनर जति आकर्षक भयो उत्ति नै बढी सेक्स हुने गरेको बताएका थिए ।
अघिल्लो लेख जिब्रो चिप्लिने समस्या भएका नेपाली यी ५ सेलिब्रेटीहरु।
पछिल्लो लेख परिवर्तित यौन जीवन